Shariif iyo Xasan Sheekh oo gaaray Warsheekh + Ujeedka - Caasimada Online
Home Warar Shariif iyo Xasan Sheekh oo gaaray Warsheekh + Ujeedka
Shariif iyo Xasan Sheekh oo gaaray Warsheekh + Ujeedka
Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxweynayaashii hore ee dalka, Mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta gaaray magaallo xeebeedka Warsheekh ee gobolka Shabeelaha Dhexe, halkaas oo lagu soo dhoweeyey.
Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh oo labaduba ah musharraxiin u taagan xilka madaxweynaha ayaa ka amba-baxay magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya waxaa safar dhinaca dhulka ah ay ku gaareen Warsheekh oo ka tirsan HirShabelle.
Sidoo kale waxaa mas’uuliyiintan si weyn magaalada ugu soo dhoweeyey qeybaha kala duwan ee bulshada iyo mas’uuliyiintada maamulka ka jira halkaasi.
Wararka ayaa sheegaya in madaxweynayaashii hore ee dalka ay usii gudbi doonaan dhinaca degmada Cadale oo uu haatan ku sugan yahay madaxweyne Cali Guudlaawe.
Ujeedka safarkooda ayaa waxa uu la xiriira u kuur-galida xaaladaha ka jira deegaanka, iyaga sidoo kale kulamo la qaadan doono waxgradka ku dhaqan degmooyinkaasi.
Sida ay ogaatay Caasimada Online socdaalka labada madaxweyne hore ayaa waxaa sidoo kale qeyb ka ah sidii loo xalin lahaa khilaafka ka taagan kursiga Hop141 oo uu haatan ku fadhiyo wasiirkii hore ee amniga Soomaaliya, Mudane Maxamed Abuukar Islow (Ducaale).
Kursigan khilaafka abuuray waxaa sheeganaya beelaha Cabdalle Caroone iyo Habar Nugaale Caroone oo sheegaya in beesha Owbakar aysan xaq u lahayn kursigan, ayna tahay in laga soo wareejiyo.
Si kastaba, Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh ayaa ujeedka socdaalkooda waxa uu yahay in khilaafka hareeyey kursigaas xal rasmi ah laga gaaro.